စတင်အသုံးပြုသူတွေအတွက် အလွန်အကျိုးရှိတဲ့ လေ့လာစရာ ပို့စ်ပါဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ရွာထဲစဝင်တုန်းကဆို Test တွေလျှောက်လုပ်လိုက်ရတာ။ :D
အဲဗား စတစ်ကီ တင်ထားရမယ့် နောက်ထပ် ပိုစ့်တခုပါဗျို့…
ကျွန်တော်မသိသေးတာ အတော်များများ သိလိုက်ရပါတယ်။
မုန့် တီတော့ တင်ပါစေဟဲ့
ကိုစိန်သော့ – ကျနော်လည်း လျောက်ကလိနေတာဗျ၊ အဲ … ယောင်ပြီးတော့ publish ကို မနှိပ်မိအောင် သတိနဲ့ ကလိလိုက်ရဗျာ။
ကျွန်တော်စသုံးလဲ မတတ်ဘူး။ ယခုလဲ မကျွမ်းကျင်သေးပါဘူး။ ပညာယူထားလိုက်ပါတယ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့ … ကိုဝင်းကျော်ရေ …
ကောင်မ..ဒီလိုတော့လဲအတော်သားဂလား…ကျေးဇူးပါ အံဇာမရေ့..များလဲ မိစိန်ပေါက်လို
ဘုတ်မက် ဆိုတော့ စုပ်ကပ် …
စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ လုပ်ပေးထားတာပဲ.. ချီးကျူးပါတယ်။
ကျေးဇူးတော့ တင်ပါတယ် ဗျာ ဒါပေမဲ့ အပြည့်မတင်နိုင်သေးဘူး
အခုမှ အားလုံးရှင်းသွားတော့တယ် ကလိချက်က တန်ဖိုးရှိပါပေ့ ။
သများကလည်း ကျေးချူး ပြန်တင်ပါလယ်ချင့် … ။
လေးပေါက်က ကလိ ဆိုလို့ ကလိမှာနော် …
ကိုအံစာတုံးရေ ကျနော့်အတွက်ရော တခြားရွာသားတွေအတွက်ပါ အင်မတန်ကောင်းတဲ့
ဘိုတုံး ကောင်းမှု နဲ့ မှ အခုမှဘဲ သေချာသိရသဗျာ ။
မမအံရေကျေးဇူးကြီးပါပေ့။ အားလုံးသိသွားပြီ။ အခုတော့သိပြီမင်းကိုကိုယ်——————။
သိချင်တာတွေရော၊ မသိသေးတာတွေရော သိလိုက်ရလို့ ကြိုးစားအားထုတ်ပြီး မျှဝေတာလေးကို ဆလုရိုက် သွားပါတယ်။
ကိုအန်စာတုံးရေ .. အကျိုးပြုစာလေးပါပဲ .. .တစ်ချို့ command တွေက ကိုယ်မသိတာတွေတောင် ပါနေသေးပါလားနော် … အသစ်တွေအတွက် .. ဒီလိုပို့စ်လေးတွေ များများရှိနေသင့်ပါတယ် … ။
အနန္တ စကြ၀ဠာ ကျေးဇူးပါ။
ကိုပေ … မသဲနုအေး … pu ma … အရီးလတ် …. ဘကြီး …. မအိတုံ … တင်တင် ….
ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..မှာ အမှတ် (၃)အနေနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်..
ကိုအံ့ရေ ကျုပ်လဲ ဓါတ်ပုံတင်ချင်လို့ အဲဒီအတိုင်းလုပ်တာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
“… 1. ပုံလေးတွေ တင်ချင်တဲ့အခါ ဒါလေးကို သုံးပါ။
အားပါးပါး! အရမ်းကိုအကျိုးရှိတဲ့ပို့စ်ပါ။ ဖတ်ပါ၊..မှတ်ပါ၊..ပြီးမှတင်ပါ..မှာ အမှတ် (၃) အနေနဲ့ ထည့်ပေးတဲ့ သူကြီးကိုလည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
တိုးရှဲ့ ရှီးဖေါ့ တပည့်စမ်းကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ကိုကိုအံ့ (ဖါးတာ) တင်ပြီးသားပို့စ် ကိုပြန်ဖျက်လို့ရပါသလား ရရင်လဲနည်းနာလေး သင်ပေးပါခင်ဗျာ…
တိုတိုပွ ရေ …
ကိုအံဇာတုံးရဲ့ Post ကို ဖတ်မိတာ နောက်ကျလေချင်းဗျာ။
ဒီလိုစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကလိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးကမ္ဘာပါပဲ
I don’t know how to use ” TAG ”.
ပို့စ် တင်တဲ့ နေရာရဲ့ ညာဖက် အခြမ်းမှာ Tag ဆိုတာ ရှိပါတယ် ..
I clear now .If I want to know something let me ask …PLS…
ကျေးဇူး..အများကြီး..တင်ပါတယ် ။ခည ။